Duulimaadkii Zambia ama Zimbabwe ayaa noqday mid aad u dhaqso badan oo fudud
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadkii Zambia ama Zimbabwe ayaa noqday mid aad u dhaqso badan oo fudud
Airlines • Airport • Aviation • Safarka Ganacsiga • News • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Zambia War Deg Deg Ah • Zimbabwe War Deg Deg Ah
QatarAirways ayaa lagu soo dhoweeyay Lusaka, Zambia
Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa u bogaadinaya Qatar Airways sida ay uga go’an tahay Afrika waxayna soo dhaweynaysaa duulimaadyada cusub ee Doha ee Lusaka iyo Harare. Hadda waa wax aad u sahlan oo dhakhso badan rakaabka Ameerika, Yurub, Hindiya, Aasiya ama Bariga Dhexe si ay ugu xirmaan Doha, Qatar si ay u gaaraan Zambia iyo ZImbabwe
Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa sheegay in ballan qaadka Qatar Airways uu gacan ka geysan doono dib u soo celinta dalxiiska Afrika.
Tani waa war u wanaagsan dib-u-horumarinta warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Zambia iyo Zimbabwe, ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika Cuthbert Ncube
Diyaaraddu waxay muujisay sida ay uga go'an tahay Afrika oo dhan masiibada iyada oo si weyn u kobcisay shabakadeeda iyada oo ku dartay afar waddo Accra, Abidjan, Abuja, Luanda iyo dib -u -bilaabidda adeegyada Alexandria, Qaahira iyo Khartoum taasoo raadkeeda gaarsiisay 27 goobood oo ku yaal 21 dal. Horaantii bishaan, Qatar Airways ayaa sidoo kale saxiixday iheshiiska khadka dhexe ee RwandAir siinta macaamiisha fursad weyn oo ay ku helaan shabakadaha isku jira ee labada shirkadood.
Qatar Airways hadda waxay ka hawlgashaa Doha ilaa Lusaka Kenneth Kaunda International Airport (LUN). Kani waa magaalada ugu weyn Zambia iyo xarunta ganacsiga.
Lusaka waa albaabka la kulmo dalxiisyada halyeeyada ah ee Zambia laga soo bilaabo Victoria Falls oo ay la wadaagto Zimbabwe, ilaa kaydadka ugaadha iyo duurjoogta kala duwan.
Dhanka kale, Harare, caasimadda Zimbabwe, waxaa lagu adeegi doonaa madaarka caalamiga ah ee Robert Gabriel Mugabe (HRE) sidoo kale waa meel leh dhaqan hodan ah, goobaha qadiimiga ah ee ku taxan Hiddaha Adduunka, iyo muuqaallo dabiici ah oo kala duwan. Diyaaradda waxaa Lusaka iyo Harare ku soo dhaweeyey salaan -dhaqameed biyo -dhaqmeed markii ay timid.
Arvind Nayer, Danjiraha Guddiga Dalxiiska Afrika, ahna Maamulaha Dalxiiska Guriddas ee Zimbabwe, iyo Cuthbert Ncube, Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa soo dhoweeyay ballaarinta dhowaan ay sameysay Qatar Airways.
Diyaaraddu waxay muujisay sida ay uga go'an tahay Afrika oo dhan masiibada iyada oo si weyn u kobcisay shabakadeeda iyada oo ku dartay afar waddo Accra, Abidjan, Abuja, Luanda iyo dib -u -bilaabidda adeegyada Alexandria, Qaahira iyo Khartoum taasoo raadkeeda gaarsiisay 27 goobood oo ku yaal 21 dal. Horaantii bishaan, Qatar Airways ayaa sidoo kale heshiis khadka dhexe ah la saxiixatay RwandAir taas oo macaamiisha siineysa fursad weyn oo ay ku helaan isku -darka shabakadaha labada shirkadood.
Madaxa Fulinta Kooxda Qatar Airways, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Waxaan leenahay qorshayaal hami leh Afrika oo ah mid ka mid ah gobollada dhaqaalahoodu sida xawliga ah u korayo, iyadoo ay sii kordhayaan baahida macaamiisha iyo kheyraadka dabiiciga ah oo aad u badan. Waxaan aragnaa karti aad u weyn oo kaliya maahan safarka dibedda ka imanaya Zimbabwe iyo Zambia, laakiin sidoo kale taraafikada gudaha ee Hindiya, UK, iyo Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan xoojino xiriirka ganacsiga iyo dalxiiska ee u dhexeeya Zimbabwe iyo Zambia, iyo meelaha loo maro shabakadda Qatar Airways, oo aan si joogto ah u kobcinno waddooyinkan si aan u taageerno soo kabashada dalxiiska iyo ganacsiga gobolka. ”
Ganacsatada iyo ganacsatada ayaa sidoo kale ka faa'iideysan doona bixinta xamuulka ee diyaaradda, taasoo u oggolaanaysa in ka badan 30 tan oo awoodda xamuulka ah toddobaadkiiba, hab kasta oo lagu taageerayo dhoofinta labada dal sida khudaarta iyo ubaxa meelaha loo maro shabakadda Qatar Airways sida London, Frankfurt iyo New York iyo dhibco badan Shiinaha. Soo -dejintu waxay ka koobnaan doontaa dawooyinka, baabuurta iyo qalabka farsamada.
B.Casiis wuxuu leeyahay,
Ogosto 11, 2021 markay tahay 13:17
Waxaan hore ula soo safray South African iyo British Airways waxaanan dareemay in adeegga duullimaadku aad u fiican yahay, laakiin marka la eego Rwanda Airways tooda ayaa aad u wanaagsan. Aniguna waan jeclahay luqadda. Qiimaha tigidhka ayaa si la yaab leh u awoodi kara inaan la xusin xamuulka bilaashka ah ee kgs macquul ah. Waan jeclahay!
Enny Mwale wuxuu leeyahay,
Ogosto 11, 2021 markay tahay 09:14
Waad ku mahadsan tahay sida Josh yiri waan soo dhaweynaynaa horumarkan cusub. Waxay nagu qaadataa wax badan inaan dib ugu laabano gurigeena oo aan ku qaddarin lahayn boorsooyinka dheeraadka ah ee khidmadda dhaadheer.
" Hore 1 2 3